Amin’ny alina no mamboly sy manao arina: olona 23 notanana am-ponja vonjimaika - ewa.mg
News - Amin’ny alina no mamboly sy manao arina: olona 23 notanana am-ponja vonjimaika
Misy ny fiaraha-miasa teo amin’ny Madagascar National Parks sy ny mpitando filaminana ao Mahajanga amin’ny fitandroana ny filaminana ao anatin’ny atiala hisorohana ny fidirana an-tsokosoko sy ny fitrandrahana, nanomboka ny taona 2013, hoy ny kaomandin’ny rezimanta voalohany ao Mahajanga ao anatin’ny faritany miaramila fahefatra, kolonely Nasinto Herilala Jean Christian. Rehefa tsy voafehin’ny mpiasan’ny MNP intsony ny fidiran’ny mpifindra monina tao anatin’ny valanjavaboary sy ny fanimbana, nanome tohana ny miaramila sy ny zandary. Tsy mbola nisy ny fifandonana mivantana hatramin’izay fa akisaka toerana fotsiny ireo mipetraka amin’ny faritra voaaro miaraka amin’ny miaramila.
Mamboly katsaka sy voamaina ireo mpifindra monina ao anaty ala ka ny hazo tapahana hanaovana ny tanimboly havadika ho arina fandrehitra. Amin’ny andro alina avokoa no hanaovana izany asa izany ka 30 ka hatramin’ny 50 olona no manatanteraka ny fambolena sy ny fiotazana ny vokatra hatramin’ny fanamboarana ny arina. Nisy ny zana-tanàna noravana niorina tao anatin’ny ala arovana sy fandravana ireo voly tratra rehetra miaraka amin’ny prefektiora sy ny MNP ary ny mpitandro filaminana.
Fametrahana brigade forestier
Tamin’ity taona ity, nidina teny ifotony ny tompon’andraikitra, ny volana avrily lasa teo. Nandray fepetra izy ireo ka olona dimy no nosamborina ary natolotra ny fampanoavana. Tolo-kevitry ny mpitandro filaminana ny fametrahana ny brigade forestier mipetraka any anaty ala mihitsy manara-maso ny tsy fanarahan-dalàna. Manampy azy ny vondron’olona eny ifotony mitantana ny ala sy manohana amin’ny fanentanana ny mponina tsy hiditra ao anatin’ny ala arovana. Voalazan’ny mpandrindram-paritry ny minisiteran’ny Tontolo iainana ao Boeny, Andrianjafy Ihandro fa nihahenjana ny fanenjehana ireo mpanimba ny atiala ao Ankarafantsika ka 23 ny olona notanana am-ponja vonjimaika ao Mahajanga, nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona ka hatramin’ity volana ity. Ireo olona dimy voalaza etsy ambony ny farany indrindra. Ny volana aogositra sy septambra no tena betsaka ny doro ala.
27 ny mpiasan’ny MNP misahana ny velarana 136 513 ha ka ny mpiasa iray mitantana 5 000 ha raha 500 ha ny fenitra.
L’article Amin’ny alina no mamboly sy manao arina: olona 23 notanana am-ponja vonjimaika a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 31/07/2019
Mbola hifampitadiavana ireo jiolahy: votsotra ilay zazavavikely nalaina an-keriny
Hatramin’ny omaly hariva tontolo, mbola nifampitady amin’ireo jiolahy mpaka an-keriny hatrany anaty alan’Amparafaravola ireo mpitandro filaminana. Ny azo antoka, efa navotsotr’izy ireo, omaly antoandro, ilay zazavavikely vao enin-taona.Navotsotr’ireo jiolahy, omaly antoandro, rehefa avy nandoana vola 20 tapitrisa Ar, ilay zazavavikely 6 taona nisy naka an-keriny tao amin’ny kaominina Ambodirano, distrikan’Amparafaravola. Fantatra, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, fa niditra an-tsehatra nanao ny fikarohana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny tamin’ny fahaverezan’ity zazavavikely ity. Taorian’ny adivarotra nifanaovan’ireo jiolahy sy ny ray aman-drenin’ilay zaza nalaina an-keriny, tapaka fa omaly maraina no natao ny fanakazolana ny vola tao amin’ny kaominina Ambakireny, distrikan’Amparafaravola.Tsiahivina fa nisy naka an-keriny, tao amin’ny kaominina Ambodirano, distrikan’Amparafaravola ny alakamisy 25 jolay 2019 lasa teo, i Aina, zazavavy vao 6 taona monja. Nanomboka teo, tsy ankiato ny fangataham-bola nataon’ireo mpaka an-keriny tamin’ny ray aman-dreniny. Taorian’io fakana an-keriny io, nisy ny fidinana ifotony tao Amparafaravola nataon’ny prefet-n’Ambatondrazaka sy ireo tompon’andraikitry ny filaminana ao amin’ny faritra Alaotra Mangoro. Milaza ny angom-baovao avy amin’ireo mponina ao Ambodirano fa 20 tapitrisa Ar ny sandan’izao famotsorana izao.Nirefodrefotra ny poa-basy…Nilaza kosa ny loharanom-baovao iray avy amin’ny mpitandro filaminana tsy nanaiky nitonona anarana fa efa tafakatra 60 tapitrisa Ar ny sandan’ny famotsorana ity zaza nalaina an-keriny ity. Mbola ifampitadiavana ireo jiolahy, hatramin’ny omaly antoandro, satria nisy ny fifampitifirana teo amin’ny zandary sy ireo jiolahy. Hatramin’ny omaly hariva, fotoana farany nanoratanay, mbola mifampitady any anaty alan’Amparafaravola ireo mpaka an-keriny sy ireo zandary. Nomarihin’ny mponina ao Amparafaravola fa tsy nisy trangana fakana an-keriny mhitsy tany amin’izy ireo raha tsy vao izao. Nilaza rahateo ireo zandary any amin’ny faritra Alaotra fa mbola hanao tatitra momba ity raharaha ity aorian’ny famotorana rehetra.Andrasana, araka izany, ny vokatra ampitain’ny zandary any an-toerana momba ireto andian-jiolahy mpaka an-keriny ireto.Sajo sy Jean ClaudeL’article Mbola hifampitadiavana ireo jiolahy: votsotra ilay zazavavikely nalaina an-keriny a été récupéré chez Newsmada.
Mpivady niara-nidoboka am-ponjaTra-tehaka tao an-tranony ao Morafeno Ambositra ny ramatoa iray malaza ratsy amin’ny asa fangalarana, afakomaly. Sarona tao amin’io olon-dratsy io ny entana halatra toy ny lambam-pandriana. “Efa tapitra namidiny kosa ny ankamaroan’ny zavatra nangalariny”, hoy ny polisy. Ny vadin’ity ramatoa voasambotra ity izay nidoboka am-ponja herinandro vitsy lasa ary izao voasaringotra izao koa ny vadiny. Tsy fandriampahalemana“Tao anatin’ny telo volana monja, mahatratra enina sahady ireo zandary lavo am-perinasa”, hoy ny ministra Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena afakomaly. Fampandriana fahalemana ary fisorohana ny asan-dahalo misy eto amintsika no nitarika ny fahafatesan’ireo mpitandro filaminana ireo. Tsiahivina fa zandary sivy maty nandritra ny taona 2020.L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Kitra- Ho henjana ny fihaonana amin’ny Elefanta: kihon-dalana ho an’ny Barea ny lalao anio hariva
Hifantoka any Abidjan, renivohitr’i Côte d’Ivoire avokoa ny sain’ny Malagasy rehetra, anio. Hotanterahina any an-toerana ny lalao mandroso hikatrohan’ny Elefanta sy ny Barea de Madagascar. Hiady tanteraka ny baolina ary hitodika any ny mason’i Afrika…Hiara-hitempo sy hiaina mivantana, hanaraka ny lalao hikatrohan’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire sy ny Barea de Madagascar avokoa ny vahoaka malagasy, anio alakamisy alina, manomboka amin’ny 7 ora. Fihaonana mandroso hiadian-toerana ho an’ny “Can 2022”, tanterahina ao amin’ny kianja Alassane Ouattara ao Ebimpé izany.Anisan’ny fihaonana andrasan’ny rehetra ity fihaonana ity, tsy ho an’ny Malagasy ihany fa ho an’i Afrika iray manontolo mihitsy sy izao tontolo izao. Ekipa nisongadina tao anatin’ny fotoana fohy mantsy ny Barea ka tena hitodihan’ny mason’ny rehetra. Na izany aza, ho henjana ny lalao satria hanohitra ny Elefanta ao an-taniny ny Barea de Madagascar, amin’ity.Raha tsiahivina, tsy mbola afa-bela tamin-dry zareo Ivoarianina mihitsy ny Malagasy, tao anatin’ireo fihaonana dimy nifanatrehana ka faharesena ny lalao efatra ary ady sahala kosa ny iray.Mailo tanteraka IvorianinaFanamby iray goavana izany no miandry ny Barea de Madagascar, amin’ity. Sarotra kanefa azo atao tsara ny mandresy ny Elefanta, ao amin’io kianja filalaovany io. Mailo tanteraka mantsy ny Ivoarianina, amin’izao fotoana izao satria hain-dry zareo tsara ny zava-bitan’ny Malagasy.Kihon-dalana lehibe ho an’ny Barea de Madagascar izany ity fihaonana anio ity, mety efa hahitana taratra ny ho tohin’ny lalana hodiavin’ny Malagasy. Fandresena, hahazoana isa 3 no tanjona, saingy tsara ihany koa ny ady sahala satria mbola hampiantrano ny lalao miverina, hatao any Toamasina ny Barea de Madagascar, ny talata 17 novambra, ho avy izao.Hahita mivantana ny lalao ireo tanàn-dehibe sasanyMialoha izany, niatrika ny fitiliana ny “covid 19”, ireo mpilalaon’ny Barea.Tsiahivina fa hahita ny lalao mivantana amin’ny alalan’ny “Ecran géant” iarahana amin’ny fiadidina ny Repbolika ho an’ny lalao anio sy ny amin’ny 17 novambra ny eny Itaosy, Ambohidratrimo, Sabotsy Namehana. Eo koa ny any Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa, miaraka amin’i Miarinarivo sy Moramanga ary Maevatànana.TompondakaL’article Kitra- Ho henjana ny fihaonana amin’ny Elefanta: kihon-dalana ho an’ny Barea ny lalao anio hariva a été récupéré chez Newsmada.
Covid-19: Situation du 29.07.2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 29.07.2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.La pandémie de covid-19 n’a pas encore épargné la Grande Île. En effet, 213 nouvelles contaminations sont recensées ce 29 juillet dont la plupart sont concentrées dans la capitale, Antananarivo. Par ailleurs, 3101 malades sont encore en cours de traitement avec 102 formes graves. Malgré l’accélération de la propagation de cette maladie, les patients guéris se multiplient également. Pour preuve, 1100 personnes ont échappé à son emprise depuis le début de cette semaine dont 504 guéries ce jour. Le Pr VOLOLONTIANA Hanta lors de son rapport a aussi signalé 6 nouveaux victimes du coronavirus soignés à l’hôpital Militaire Soavinandriana (2) et au CHUJRB (4). Ainsi, le nombre de décès à Madagascar a actuellement atteint 99.L’article Covid-19: Situation du 29.07.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Nécrologie du 24 août 2021
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 24 août 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Faritra Boeny: homen-danja sy hampiroboroboana ny asa tanana
Homen-danja sy hampiroboroboana ny sehatry ny asa tanana any amin’ny faritra Boeny. Izay no foto-kevitra entina hanajariana ny Ceram (Centre regional de l’artisanat malagasy Boeny) sy fanamboarana trano iray faharoa mahaleotena tarihin’ny minisitry ny Indostria, ny varotra, sy ny asa tanana (Mica), Rakotomalala Lantosoa.Toerana atao hanamora ny fanofanana sy hanakaiky kokoa ny mpiofana any amin’ny faritra, atao ihany koa ho fihaonan’ny mpitantan-draharaha sy ny mpanao asa tanana, ho toeram-pivarotana hihaonan’ireo mpanjifa amin’ireo mpihary. Hisy, araka izany, ny fampisehoana sy ny toeram-pivarotana hampiroboroboana ny tolotra sy ny tinady ao amin’ny faritra.Manana ny mampiavaka azy manokana ny asa tanana vita any amin’ny faritra Boeny, mirakitra ny kolontsaina any an-toerana. Hita izany, ohatra, amin’ireo haingo sy fitafian’ny vehivavy, ary natao indrindra ho zakan’ny mpanjifa eto an-toerana ny vidiny. Manome toky ny Mica fa tohizana ny fihodin’ny sehatry ny asa tanana hisarihana tanora, hanehoana fa matihanina ary hananganana tontolo iray hampivoatra ny toekarena malagasy. R.MathieuL’article Faritra Boeny: homen-danja sy hampiroboroboana ny asa tanana a été récupéré chez Newsmada.
Fitsaboana ny governora Rasoamaromaka: nitondra fanazavana ny eo anivon’ny Assistant +
Nitondra fanazavana ma­noloana ny resabe momba ny fitsaboan-tenan’ny governora Rasoamaromaka Hery tany ivelany ny eo anivon’ny fiantohana ara-pahasalamana As­sis­tant +. “Tsy maintsy nanao ny fanavotana ny ainy ka antony namindrana azy haingana tamin’ny alalan’ny fiaramanidina (Evasan) tatsy La Reunion ny fiandohan’ny vo­lana marsa teo”, hoy ny filoha tale jeneraly, i Patrick Cejudo, teny Ivato tamin’ity herinandro ity. Nanteriny fa niharatsy sy nisy fahasarotana ny toe-pahasalamany ka tsy maintsy natao ny vonjy aina rehefa tsy vita teto intsony izany, araka ny nambarany. Notsiahiviny fa mpikambana teo anivon’ny Assistant + efa ho 10 taona ity governora ity ary mahaloa ny latsak’emboka 28 000 Ar isam-bolana. Anton’ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana azy izany. Tsiahivina fa 40 izao ireo marary tsaboin’izy ireo eto an-toerana, amin’izao fo­toana izao. Manara maso iza­ny ireo mpitsabo eo anivon’ity tranom-piantohana momba ny fahasalamana ity.Synèse R.L’article Fitsaboana ny governora Rasoamaromaka: nitondra fanazavana ny eo anivon’ny Assistant + a été récupéré chez Newsmada.
Faran’ny herinandro: nangingina ny fetin’ny Paska
Nilamindamina ny fetin’ny Paska raha ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Nisy hatrany ny fiangonana nisokatra na eo aza ny tahotra ny valanaretina, saingy tsy dia hipoka toy ny mahazatra.Nozarazaina rahateo ny fidirana ka nanaja izany ny kristianina, tsy nisy ny fisisihana sy ny tangorona mihoa-pampana. Voahaja ny elanelana sy ny fepetra ara-pahasalamana teny amin’ireo fiangonana. Tsapa ho nihena ihany anefa ny mpivavaka na teo aza izany fandaminana izany, raha ny fanamarihan’ny mpitandrina iray.Efa noferana tsy hamonjy fotoam-bavaka rahateo ireo marefo sy zokiolona. Ankoatra izay ny fepetra nivoaka fa tsy tokony hihoatra ny 100 ny olona miara-mivavaka.Ny alatsinain’ny Paska kosa, vitsy ireo nivoaka ny nitsangantsangana raha ny tazana tamin’ireo toerana niankandrefana an’Antananarivo iny. Tsy nisy ihany koa ny karazana kilalao sy fialamboly fanao rehefa fetin’ny Paska amin’ireo toerana mahazatra.Nangingina tsy toy ny hatrizay, araka izany, ny fetin’ny Paska tao anatin’ny roa taona nampisy ny aretina covid-19 izay.Tatiana A L’article Faran’ny herinandro: nangingina ny fetin’ny Paska a été récupéré chez Newsmada.